Mkpụrụ ego nzuzo iri kacha mma na otu esi azụta ha - Cazoo
Mbido » Mbido » Mkpụrụ ego nzuzo iri kacha mma yana otu esi azụta ha
Tag: Binance, Monero, Oasis Network, Netwọk Phala, mkpụrụ ego nzuzo, nzuzo, Zcash
Le mkpụrụ ego nzuzo bụ cryptocurrencies nke nwere ike zoo ma ọ bụ mebie azụmahịa na blockchain iji nọgide na-enwe ọkwa dị elu nke nzuzo na amaghị aha.
Usoro cryptographic ha dị elu bụ ihe na-edobe mkpụrụ ego nzuzo dị iche na ego crypto ndị ọzọ dị ka Bitcoin na mkpụrụ ego Alt ndị ọzọ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnwe nzuzo zuru oke yana enweghị aha zuru oke na azụmahịa crypto? Ọ bụrụ na ọ nwere ezi uche, nke a bụ ebe "mkpụrụ ego nzuzo" na-abata.
Ego ego crypto oge niile abụghị nke nzuzo, n'ihi na azụmahịa niile dị na blockchain, akwụkwọ ndekọ ego ọha, na-emeghekwa onye ọ bụla. Ọ bụ ezie na usoro dị otú ahụ na-enye ọtụtụ uru, ọ naghị enye ndị ọrụ nzuzo zuru oke na amaghị aha, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ijikọ njirimara na adreesị mmadụ.
Mkpụrụ ego nzuzo adịchaghị iche na bitcoin ma ọ bụ altcoin ndị ọzọ. Ha na-ezochi adreesị akpa ego na ozi na-adịghị ahụkebe nke enwere ike iji mata onye nwe obere akpa.
N'isiokwu a, anyị ga-abanye miri emi n'ime ihe mkpụrụ ego nzuzo bụ, ka ha si arụ ọrụ, yana otu ị ga-esi tinye ha na obere akpa gị na Binance.
Kedu ihe bụ mkpụrụ ego nzuzo?
Kedu usoro cryptographic nke mkpụrụ ego nzuzo na-eji?
A naghị achọpụta mkpụrụ ego nzuzo n'ezie?
Mkpụrụ ego nzuzo kacha mma na Binance
Mkpụrụ ego nzuzo bụ klas nke cryptocurrencies e wuru na ụkpụrụ abụọ bụ isi: amaghị aha na enweghị ike ịchọta.
Kedu ka mkpụrụ ego nzuzo si arụ ọrụ?
Dị ka ego crypto ndị ọzọ, mkpụrụ ego nzuzo na-ejikwa teknụzụ blockchain dị ka akwụkwọ ndekọ ego ekesa. Ọ bụ ezie na azụmahịa na cryptocurrencies dị iche iche na-abụkarị ọha, a na-emepụta mkpụrụ ego nzuzo n'ụzọ na-eme ka ọ sie ike (ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume) ijikọ azụmahịa. Ọ gaghị ekwe omume ikpebi ebe ma ọ bụ ebe ego ahụ na-aga.
Ihe dị iche na mkpụrụ ego nzuzo na ego crypto oge niile bụ na ha na-eji nzuzo zoo nguzozi nke obere akpa na adreesị onye ọrụ iji mee ka amaghị aha na enweghị ike ịchọta ya.
M na-agbalị ịkọwapụta usoro cryptographic anọ nke ụfọdụ ego onwe ha na-eji edebe ozi nzuzo.
Adreesị nzuzo (Adreesị nzuzo): Azụmahịa ọ bụla na-ewepụta adreesị ọhụrụ iji chebe nzuzo nke nnata. Nke a na-achọpụta na ndị ọzọ na-apụ apụ enweghị ike ijikọ ịkwụ ụgwọ ọ bụla na adreesị obere akpa gị.
Udochukwu: Ọ na-arụ ọrụ dị ka igwekota mkpụrụ ego nke na-ejikọta azụmahịa nke ọtụtụ mmadụ n'ime otu azụmahịa. Mgbe ahụ, ndị ọzọ na-ekewa n'ezie ego nke mkpụrụ ego ziri ezi wee zigara ndị nnata ha. Onye nnata ọ bụla na-enweta mkpụrụ ego ahụ na adreesị ọhụrụ iji belata traceability.
Zk-SNARKs: Zk-SNARKs, mkpirisi maka ihe ọmụma efu nkenke nkenke na-adịghị emekọrịta ihe nke ihe ọmụma, na-enye gị ohere igosi na azụmahịa dị irè na-enweghị ịkekọrịta nkọwa ya (onye na-ezipụ, onye nnata, ego).
Akara mgbanaka: Mgbe iji igodo nzuzo bịanye aka na azụmahịa, ndị ọzọ nwere ike jikọta mbinye aka gị na adreesị gị. Mbinye aka mgbanaka na-egbochi nke a ime.
Ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ mbinye aka n'otu azụmahịa ahụ, ọ na-esiri ndị ọzọ ike ijikọ mbinye aka gị na adreesị gị.
Nke a dabere na nhazi na nhazi nke mkpụrụ ego nzuzo ọ bụla, n'ihi na ụfọdụ bụ ndị a na-achọpụta karịa ndị ọzọ ... na ọ bụghị ha niile bụ nke nzuzo dịka ha na-ekwu. Protocol emebere nke ọma nwere ike ịnwe ntụpọ nwere ike ime ka enwere ike ịchọta azụmahịa ha. Otú ọ dị, n'ịtụle usoro ezoro ezo na nke ugbu a, mkpụrụ ego nzuzo na-arụ ọrụ nke ọma. Kpachara anya mgbe niile: Site na imepụta ngwa nyocha ọhụrụ, kọmpụta nwere ike ịdị ike otu ụbọchị iji mebie ụzọ nzuzo ọgbara ọhụrụ.
Mkpụrụ ego nzuzo dị mma maka ndị na-achọ ezigbo nzuzo ego. N'okpuru ebe a, edepụtala m mkpụrụ ego nzuzo kacha mma ị nwere ike ịtụle ịgbakwunye na obere akpa cryptocurrency gị (* ọnụ ahịa na ọnụ ahịa ahịa dịka nke Eprel 2022):
Monero (XMR) na ọnụ ahịa $ 217,50 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 3.936,97M.
Oasis Network (ROSE), na ọnụ ahịa $ 0,27 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 927,01M *.
Decred (DCR), na ọnụ ahịa $ 62.50 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 868.52M *.
nzuzo (SCRT), na ọnụ ahịa $ 5.37 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 876.89M.
Horizen (ZEN), na ọnụ ahịa $ 48.18 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 589.19M *.
Anya (XVG), na ọnụ ahịa $ 0,013 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 218,47M *.
Network Dusk (DUSK), na ọnụ ahịa $ 0.50 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 201.48M *.
Netwọk Phala (PHA), na ọnụ ahịa $ 0.29 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 79.20M *.
doo (BEAM), na ọnụ ahịa $ 0.38 yana ọnụ ahịa ahịa nke $ 42.54M *.
Ebe ọ bụ na Bitcoin na ọtụtụ ndị ọzọ cryptocurrencies na-agba ọsọ na a decentralized netwọk, ha nwere ike inye ụfọdụ n'ókè nke nzuzo. Dịka ọmụmaatụ, ikwe ka ndị ọrụ mepụta obere akpa na-ekpugheghị njirimara ha ozugbo. Agbanyeghị, ha abụghị nke nzuzo kpamkpam n'ihi na edekọ azụmahịa ahụ na blockchain. Dị ka nke a, mkpụrụ ego nzuzo nwere ike ịbụ nhọrọ maka ndị na-achọ ọkwa dị elu nke amaghị aha na nzuzo.
Nke ahụ kwuru, cheta DYOR tupu ịzụta na itinye ego nzuzo ọ bụla.
Isiokwu bu nke aEnyemaka bọọlụ: gbanye fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD na Binance
Isiokwu ọzọMetiriks ị ga-atụle maka ịzụrụ na ire NFT
Etu ị ga - esi nweta cryptocurrencies na Binance Liquid Swap
Kedu ngwa kacha mma maka ịzụta cryptocurrencies?
Binance: Nyefee kredit ozugbo na nnyefe waya SEPA